လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်, UHF တံဆိပ်တုံး, အီလက်ထရောနစ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို, လုံခြုံရေးတံဆိပ်ခတ်
အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် / Tie / ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကို အီလက်ထရောနစ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို, လုံခြုံရေးတံဆိပ်ခတ်, UHF တံဆိပ်တုံး
ပစ္စည်း: ကို ABS အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ် + အားဖြည့်သံမဏိဝါယာကြိုး
RFID ချစ်ပ်: Impinj J41, သို့မဟုတ်သတ်မှတ်
frequency: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860 ~ 960MHz.
protocol စံ: EPC GEN2, ISO ကို 18000-6C
/ Write အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 30စင်တီမီတာ (အဆိုပါဖတ်ပြီးသားများနှင့်ရေးကိရိယာနှင့်အညီ)
tag ကိုအရွယ်အစား: 30× 23 × 11mm, သံမဏိဝါယာကြိုး 280mm ရှည်လျားသော, သံမဏိဝါယာကြိုးအချင်း 1.5mm
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -40℃ ~ + ကို 100 ℃
ဆန့်နိုင်အား: 250 KGF
အရောင်များ: အနီေရာင်, အဖြူ, အနက်ရောင်, ဝါသော, ပြာသော, စိတ်ကြိုက်သည်အခြားအရောင်များ
အဖုံး: 50PC များ / အိတ်, 1000PC များ / စက္ဏူထူ
နှိုင်းယှဉ်ရိုးရာတံဆိပ်ခတ်နှင့်အတူအီလက်ထရောနစ်ဖျံ, အောက်ပါအားသာချက်များကိုရှိပါတယ်: အီလက်ထရောနစ်တံဆိပျမှာ RFID ချစ်ပ်ပါရှိသည်, RFID ချစ်ပ်တစ်ခုစီတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာထူးခြားသည့်နံပါတ်ရှိသည်, တံဆိပ်ခတ်ပြီးနောက်အမှတ်စဉ်နံပါတ်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ကူးယူမရနိုင်ပါ. ထူးခြားသောအမှတ်စဉ်နံပါတ်အပြင်ရှိခြင်းအပြင် RFID ချစ်ပ်, တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရေးရန်မှတ်ဉာဏ်ကိုအီလက်ထရွန်နစ်တံဆိပ်ခတ်။ ရေးရေးစက်ဖြင့်ရေးသားနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တံဆိပ်ခတ်အဖြစ်, ပိုင်ရှင်နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များ, နှင့်သတင်းအချက်အလက် encrypt လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်, သာသော့သတင်းအချက်အလက်ပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်သိတယ်, စစ်ဆေးသူတွေကအီလက်ထရောနစ်တံဆိပ်တုံးဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုသုံးနိုင်သည်သိုလှောင်သည့်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုဖတ်နိုင်သည်.
တံဆိပ်တံဆိပ်များကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရပုံနှိပ်နိုင်သည်, ပုံစံ, ဂဏန်း, ရက်စွဲ, ဘားကုဒ်, စသည်တို့ကို, တံဆိပ်များမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖောက်သည် Self- ကော်စတစ်ကာများအားဖြင့်လည်း.
အသုံးပြုမှု: တိုက်ရိုက်ဖောက်ထားခြင်းနှင့်ပေါ်မှာဆွဲ. တစ်ကြိမ်ဖျံများအတွက်ဤတံဆိပ်တုံး, နောက်တဖန်မသုံးနိုင်ပါ. အလိုတော်ဆွဲပြီးနောက်သဲလွန်စတွေရှိတယ်, တစ်ခုချင်းစီတွင်ထူးခြားသောနံပါတ်စဉ်ရှိသည်, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အားကြီး, သော့ခတ်ရန်လွယ်ကူသည်.
ဖယ်ရှားရန် cable ကို clamp / wire cutters clamp ကိုသုံးပါ
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု, တူရိယာအမျိုးမျိုး, ဘဏ္financeာရေး, စတိုးဆိုင်များ, လျှပ်စစ်မီး, ရေနံဓာတု, အထုပ်, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ကွန်တိန်နာ, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, ဥယျာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ.
သင့်ထုတ်ကုန် UHF Seal ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်, အီလက်ထရောနစ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို, လုံခြုံရေးအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်
နောက်တစ်ခု: ပြန်သုံးနိုင်သော RFID Tie Tag ကို, ပြန်သုံးနိုင်သောလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို